Maamulka Somalilland oo Khatar ku ah Nabadgaliyada Ethiopia – Rasaasa News
Maamulka Somalilland oo Khatar ku ah Nabadgaliyada Ethiopia
Jul 3, 2011 ayaa aad uga calool waydsan xidhiidhka qarsoodiga ah ee u dhaxeeya xukuumada Eritrea iyo maamulka Somaliland iyo falalka lidka ku ah qaranimada Ethipia ee uu ku kacayo baryahan maamulka Somaliland., Xukuumada Ethiopia
Kulan qarsoodi ah, ayaa ku dhex maray magaalada Dire Dawa, saraakiisha amaanka dawlada wadaaga Ethiopia iyo masuuliyiinta ugu saraysa maamulka Somalidland dhamaadkii bishii June 27, 2011.
Xukuumada Ethiopia, ayaa aad uga calool waydsan xidhiidhka qarsoodiga ah ee u dhaxeeya xukuumada Eritrea iyo maamulka Somaliland iyo falalka lidka ku ah qaranimada Ethipia ee uu ku kacayo baryahan maamulka Somaliland.
Warar aan soo if bixin oo ku eg uun sirdoonka ayaa sheegay, in Somaliland ay xidhiidh dhaw oo qarsoodi ah oo aan xadigiisa iyo xiliga uu bilowday midna la ogayn la heh xukuumada Eritrea. Bishii May dhaadkeedii ayey ah, markii difcadii ugu horaysay oo ciidanka Somaliland ah ayaa ka soo qalinjabisay tababar qarsoodi ah oo mudo lix bilood ah ay ku qaadanayeen Eritrea.
Ciidamada tababarka soo dhamaystay ee Somaliland oo tiradoodu lagu sheegay 71 xubnood, ayaa mudo 5 bilood ah tababar milatari ku qaadanayey xeebta kulul ee Musawac, ciidamadaas ayaa ka degay dekada macmalka ah ee Karin bishii May.
Jarirada Pentagon, ayaa qortay, in la malaynayey ciidamadaasi in ay yihiin ciidan ONLF, oo si qarsoodi ah uga soo gudbaya xeebaha Somaliland, kuwaas marar hore ka soo degay xeebaha Somaliland. Laakiin, waxaa la cadeeyey in ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamo ay leedahay Somaliland, kuwaas oo kolkii dambe degay xero milatari oo ku taal Odweyne.
Wararku waxay sheegayaan in ay jiraan ciidan kale oo ay leedahay Somaliland, kuwaas oo aan tiradooda la sheegin tababarna ku qaadanaya Eritrea. Waxaa la sheegay in ay ka dageen dekada Adulis oo wax yar u jirta dekada weyn ee Musawac.
Xeebaha Somaliland ayey labo mar ka soo dageen ciidamo ay leeyihiin Jabhadaha ka dagaalama dalka Ethiopia, kuwaas oo qaarkoodna galeen gudaha Ethiopia qaarna dhaxda ay isku heleen ciidamada Ethiopian ah.
Dhawaan ayey ahayd kolkii labo ka mid ah shaqaalah Hayada cuntada aduunka oo laga afduubay gabalka Ogaden, la geeyey Hargaysa, kuwaas oo todobaadkii hore lagu sii daayey Hargeysa.
Somaliland ayaa khaladka dhankeeda ee ku yimaada Ethiopia, kaga raali galisa in ayna awood lahayn. Laakiin, dhawaan ayey ahayd kolkii labo ka mid ah Booliska degaanka Somalida Ethiopia oo daba joogay shaqaalaha WFP, ee Hargeysa lagu haystay lagu xidhay isla Hargeysa.
Xukuumada Ethiopia waxay garwaaqsatay in xasilooni darida kaga imanaysa Somaliland ay tahay ula kac, xidhiidh dhaw oo qarsoodi ahna la leedahay xukuumada Eritrea. Arintaas oo ay Ethiopia u aragto bawd fur amaan daro oo ay furatayna Somaliland, ma cada talaabada ay qaadi doonto Ethiopia.
Ethiopia ayaa mudo 21 sano ah la tacaalaysay xasilooni darada kaga imanaysa dalka ay dariska yihiin ee Somaliya oo burbur iyo dawlad la,aani daashatay.
Maamulka Somaliland ayaa awal hore ahaa maamulada Somaliyeed ee amaankoodu degan yahay saaxiib dhawna la ahaa Ethiopia.